नेपाल र नेदरल्याण्ड्स वीच दोस्रो एकदिवसीय खेल : सन्दिपले लिए एउटै ओभरमा २ विकेट ! | Kendrabindu Nepal Online News
नेपाल र नेदरल्याण्ड्स वीच दोस्रो एकदिवसीय खेल : सन्दिपले लिए एउटै ओभरमा २ विकेट !
१९ श्रावण २०७५, शनिबार ०६:०७
शुक्रबार भएको नेपाल र नेदरल्याण्ड वीचको दोस्रो एकदिवसीय खेलमा सन्दिप लामिछानेले नयाँ रेकर्ड राखेका छन् । २९ औं ओभर बलिङ गर्न आएका सन्दिप लामिछानेले नेदरल्याण्ड्सका दुई विकेट लिदै नेपाललाई खेलमा फर्काएका हुन । एउटै ओभरमा उनले २ विकेट लिएका थिए ।
सन्दीपले २८ दशमलव ४ ओभरमा ड्यानीयल टेर ब्राकलाई एलबिडब्लु धरापमा पार्दै बेस्ली बरेसीसँगको लामो साझेदारी तोडेका हुन भने त्यसपछि ब्याटिङ गर्न आएका बस डी लिडे समेत २९ औं ओभरको अन्तिम बलमा स्टम्पिङ आउट भएका थिए । सन्दिपले २९ औं ओभरमा २ विकेट लिएपछि नेपाल पुनः खेलमा फर्केको थियो । हिजोको खेल नेपालले आफ्नो पक्षमा पार्दै १ रनको रोमाञ्चक जित दर्ता गरेको छ ।
sandip ko naya record
Prevबोक्सी लागेर मरेको मान्छेको पेटबाट सर्प, भ्यागुता निकाल्ने भन्दै शव टुक्रा टुक्रा !
सिक्टा सिंचाई आयोजनाको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीरNext